PSJTV | किन हट्यो बूढीगण्डकीबाट गेजुवा ?
किन हट्यो बूढीगण्डकीबाट गेजुवा ?
काठमाडौं: चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) बूढीगण्डकी आयोजनाबाट पछि हटेको छ । लागत बढाउने चलखेल गर्न नपाउने भएपछि गेजुवाले आयोजनाबाट हात झिकेको हो ।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त (१२ सय मेगावाट) को ठेक्काको सम्झौता मात्र गर्न बाँकी थियो । गेजुवाले नेपालका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना हात पार्न सफल भएको थियो । विगत चार महिनादेखि सरकारी संयन्त्रबाट ‘सम्पर्क्विहीन’ रहेको गेजुवाले आफू पछि हटेको औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन ।